Global Voices teny Malagasy » Fantaro ireo bilaogera vaovao ao Liberia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Jolay 2018 17:58 GMT 1	 · Mpanoratra David Sasaki Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Tamin'ny volana Oktobra (2008) lasa teo, mpanao gazety Liberiana sivy no nianatra ny fomba fibilaogina nandritra ny atrikasa tao amin'ny Ambasady Amerikana ao Monrovia . Noho ny fanohanan'ny Foibe ho an'ny Demokrasia sy ny Fampandrosoana  ao amin'ny UMass Boston, tafaverina eto Monrovia aho ankehitriny miaraka amin'i Kathleen Flynn  sy Ken Harper  mba hanampy handrindra atrikasa fibilaogina maromaro kokoa. Ny lahatsary etsy ambony dia mampahafantatra ny sasany amin'ireo mpanao gazety vao haingana indrindra sy ireo mpianatra asa fanaovan-gazety ao Liberia mba hanandrana hibilaogy.
Varney Karneh nanoratra momba ny Valan-dresaka iraisam-pirenena vao haingana momba ny fampaherezana ny vehivavy, ny Fampandrosoana ny Fahaiza-mitarika, ny Filaminana sy ny Fandriampahalemana iraisam-pirenena ary ny fomba hisitrahan'ny tovovavy izany . Mikasa hampiasa ny bilaoginy  i Emmanuel Tobey, mpaka sary fanao an-gazety ao amin'ny Firenena Mikambana mba hampiseho ny sarin'ny hatsarana voajanaharin'i Liberia. Saturday H. Seke nanasongadina  atrikasa fampiofanana haisoratra notontosain'ny ONG ALFALIT INTERN. Denna Gibson kosa mitaraina noho ny tsy fisian'ny varavarana-misokatra sy ny fanomezan-kaja ho an'ny vehivavy atleta ao Liberia . Aremita mihevitra fa sakana roa lehibe eo amin'ny lalan'ny fampandrosoana an'i Liberia ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra sy ny fitondrana vohoka eo amin'ny tanora . Moses B. Togbah kosa mihevitra fa sakana lehibe ihany koa ny haratsian'ny lalana . Farany, Laurina Honore , mpanao gazety ao amin'ny radio Sky FM, mamaritra ny zava-niainany tao amin'ny atrikasa:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/30/123706/
 atrikasa tao amin'ny Ambasady Amerikana ao Monrovia: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2008/10/19/liberian-journalists-become-bloggers/
 Foibe ho an'ny Demokrasia sy ny Fampandrosoana: http://www.mccormacktmp.umb.edu/cdd/index.jsp
 Valan-dresaka iraisam-pirenena vao haingana momba ny fampaherezana ny vehivavy, ny Fampandrosoana ny Fahaiza-mitarika, ny Filaminana sy ny Fandriampahalemana iraisam-pirenena ary ny fomba hisitrahan'ny tovovavy izany: http://varneykarneh2004.wordpress.com/2009/03/17/the-climax-of-liberias-women-colloquium-and-its-benefits-for-teenage-girls/
 ny bilaoginy: http://2tango.wordpress.com/2009/03/17/3/
 mitaraina noho ny tsy fisian'ny varavarana-misokatra sy ny fanomezan-kaja ho an'ny vehivavy atleta ao Liberia: http://dennagibson.wordpress.com/2009/03/17/female-soccer-in-liberia/
 mihevitra fa sakana roa lehibe eo amin'ny lalan'ny fampandrosoana an'i Liberia ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra sy ny fitondrana vohoka eo amin'ny tanora: http://zoesaynee.wordpress.com/2009/03/17/some-causes-of-ills-in-the-liberian-society/
 haratsian'ny lalana: http://mosesbtogbah.wordpress.com/2009/03/17/the-problem-of-bad-road-condition-in-liberia/